Nhau - Kushandiswa kwemagetsi uye optical defog mu cctv yakareba renji zoom lens
Kune maviri marudzi e defog tekinoroji.
Kazhinji, 770 ~ 390nm mwenje unooneka haugone kupfuura nemhute, zvisinei, infrared inogona kupfuura nemhute, nekuti infrared ine yakareba wavelength kupfuura mwenje unooneka, iine yakajeka yakajeka dhizaini. Iyi nheyo inoshandiswa mukushomeka kwemaziso, uye yakavakirwa pane yakasarudzika lens uye firita, kuitira kuti iyo sensor igone kuona padyo-infrared (780 ~ 1000nm), uye nekuvandudza kujekesa kwemufananidzo kubva kunobva ne optically.
Asi nekuti infrared isingaonekwe mwenje, iri pamusoro pechiyero chemufananidzo wekugadzirisa chip, saka chete chitema chena uye chena mufananidzo unogona kuwanikwa.
Kudzivirirwa kwemagetsi ndiko kushandiswa kwemifananidzo yekugadzirisa algorithms kusimudzira mufananidzo. Kune akawanda maitiro ekushandisa emagetsi-defog.
Semuenzaniso, asiri-modhi algorithms anoshandiswa kuwedzera musiyano wemifananidzo, nokudaro nekuvandudza kuzviisa pasi kwekuona maonero. Uye zvakare, pane yemodheru-yakavakirwa mufananidzo yekudzoreredza nzira, iyo inoongorora izvo zvikonzero zvemwenje wekuvhenekesa uye kudzikisira kwemifananidzo, inoratidzira iyo yekudzikisira maitiro, uye inoshandisa inverse kugadzirisa kupedzisa kudzoreredza mufananidzo. Iyo yemagetsi-defog mhedzisiro yakakosha, nekuti mune dzakawanda kesi chikonzero chechinhu chisina kujeka chemufananidzo chakabatana nekugadziriswa kweiyo lens pachayo uye nemufananidzo wekugadzirisa algorithm mukuwedzera kune bvungapfunga.
Iko kuvandudza kwe defog tekinoroji
Pakutanga kwa2012, iyo block zoom kamera module SC120 yakatangwa naHitachi ine basa re defog. Munguva pfupi, Sony, Dahua, Hivision, nezvimwewo vakavhura zvigadzirwa zvakafanana neelektroniki-defog. Mushure memakore akati wandei ekuvandudza, iyo yemagetsi-defog tekinoroji yakawedzera zvishoma nezvishoma. Mumakore achangopfuura, vagadziri veLens vane kubatana kwakadzika nevakagadziri vekamera, uye vakateedzera zvakateerana zvigadzirwa zve optical-defog.
Mhinduro na View Sheen
Viewsheen yakatanga chirongwa che zoom kamera module yakashongedzwa neyakajairwa super defog (optical + yemagetsi). Kuti uwane kuita kwakanyanya kwe defog. Iyo optical + yemagetsi nzira inoshandiswa kukwidziridza kubva kune yemagetsi sosi kusvika kumashure-kumagumo kugadzirisa. Iyo optical sosi inofanirwa kubvumidza yakawanda seye infrared mwenje sezvinobvira kuti ipfuure nepakati, saka hombe yekuvhura lens, huru sensor uye firita ine yakanaka yekurwisa-kuratidzira mhedzisiro inofanirwa kutariswa zvakazara. Iyo algorithm inofanirwa kunge yakavakirwa pazvinhu zvakaita sekureba kwechinhu uye kusimba kwemhute, uye sarudza danho re defog, kudzikamisa ruzha runokonzerwa nekugadziriswa kwemifananidzo.